Myanmat xxxx video | UK
Myanmat xxxx video advice on dating older men
Posted by / 12-Feb-2020 03:49
.ဒီဇာတျကားထဲမှာမငျးသားကွီး Andy Laoနဲ့ Louis Kooတို့အဓိက ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပွီး Louis Kooကိုလဲပုံစံတဈမြိုးနဲ့မွငျတှရေ့မှာဖွဈမှာပါ..
ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဟောငျကောငျမွို့မှာအကွီးဆုံးမူးယဈရာဇာဖွဈလာတဲ့ တိကနျြ့ဟာဟောငျကောငျမူးယဈဈေးကှကျကိုအုပျစိုးဖို့ ကွိုးစားနသေူပါ.. တဈဖကျမှာလညျး ဟောငျကောငျမူးယဈနှိမျနငျးရေးအဖှဲ့က ဒါရိုကျတာယှီစှငျ့ထနျြးဟာ မူးယဈရာဇာတှအေားလုံးကိုဖွိုခှဲဖို့ကွိုးစားလာတဲ့အခါ ဘယျလိုတှထေိပျတိုကျရငျဆိုငျကွမလဲ...သူတို့ကွားမှာ ဘယျလိုအငွိုးတရားတှရှေိနတောလဲဆိုတာ စိတျလှုပျရှားဖှယျကွညျ့ရှုရမှာဖွဈပါတယျ Translated & Review By Phyo Zaw Encoded By LK ငယ်ဘဝကတည်းက နာကျင်ထိခိုက်ရတဲ့ ကလေးဘဝနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ စကားနည်းလူအေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်ကလပ်စ်ဟာ ဘာလင်မြို့စွန်နားကိုတိုက်ခိုက်ရမဲ့ဗုံးကြဲလေတပ်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ဖွဲ့အသစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ အရာရှိဒေါက်ကလပ်စ်နဲ့ တစ်ချိန်လုံးမတည့်ဖြစ်နေတာတော့ ချာလီဆိုတဲ့တပ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဒေါက်ကလပ်စ်က ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့အရာရှိအယ်ဖီလ်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိဖို့ဒေါက်ကလပ်စ်တစ်ယောက် သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ကြိုးစားဖြေရှင်းပုံလေးတွေလဲပါပါတယ်။ ၁၉၄၀ပြည့်နှစ်ရဲ့စစ်ပွဲအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ File Size : (1.3gb) and (680 MB) Quality : blu-ray 1080p Running Time : 1h 38min Format : Mp4 Genre : Action, Drama, War Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : Bluray.1080p.x264-RSG Translated by Charm Encoded by sithu Battle Royale (2000) ဒီကားအကွောငျးကို မပွောခငျ Pubg ဆိုတဲ့Gameကို အားလုံးသိကွမယျထငျပါတယျ Pubg ကို ရေးဆှဲခဲ့တဲ့ သူက ဒီကားကိုကွညျ့ခဲ့ပွီး ဂိမျးအဖွဈပွနျ အသကျသှငျးဖို့ အကွံရခဲ့တယျလို့ဆိုထားပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးအနနေဲ့က ဂပြနျနိုငျငံဟာ လူဦးရတှေထေူထပျလကျြရှိပွီး အလုပျအကိုငျလဲရှားပါးနပေါပွီ အထကျလူကွီးတှရေဲ့ မစီမံနိုငျတဲ့အပျေါ ကြောငျးသား လူငယျတှကေလဲ သပိတျမှောကျကွပါတယျ ဒီမှာတငျ အစိုးရအဖှဲ့က ကြောငျးသငျခနျးစာအသဈတဈခုတိုးပေးလျုကျပါတယျ BR actလို့ချေါတဲ့ ဒီသငျခနျးစာဟာ ကြောငျးသားတှကေို ကြှနျးတဈကြှနျးပျေါပို့ အခြိနျ၃ရကျအတှငျး ရှငျသနျသူတဈယောကျထဲကနျြတဲ့အထိ အခငျြးခငျြးသတျဖွတျစပေါတယျ နှဈစဉျ နိုငျငံတဈဝှမျးလုံးက ၈တနျးကြောငျးသားတှထေဲက အတနျးခှဲတဈခုကို ကပြနျးရှေးခယျြပွီး ကငျြးပလရှေိ့တဲ့ BR actသငျရိုးကို နာနာဟာရာတို့အတနျးက ကံထူးပွီးသငျရတဲ့အခါမှာတော့...
ဘာတှဖွေဈလာမလဲ ဆကျလကျကွညျ့ရှူလိုကျကွပါ File Size : (1gb) and (600 MB) Quality : blu-ray 720p Running Time : 1h 54min Format : Mp4 Genre : Adventure, Drama, Sci-Fi Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : Bluray.1080p.x264-RSG Translated by Waizin ...
ဒါပမယှေ့ အမှားကှီးမှားခဲ့တာတယှ ဂှီရာဖတကှ ငပှငရေူပှ လူဘောကှော့ဖှဈနခေဲ့ပှီး ဂုတကှ သူ့ပိုကဆှံယူတဲ့ခိုငှးဖကဖှဈခဲ့ရတယှ...
တဈရကမှာ ဂုတကှ ဂှီ့မိနှးကလေးကိဈစတခုမှာ မမှောလှငှ့ပဲ ဝငပှါခဲ့မိတယှ အဲ့ဒီအရာကပဲ သူမဘဝကိုအပှောငှးလဲကှီးပှောငှးလဲသှားစခေဲ့တယှ ဂှီ့က သူ့ရညှးစားကမှေးတဲ့ သူ့သမီးကို ဂုတသှမီးအဖှဈမှေးပေးဖို့ ပိုကဆှံပေးငှါးခဲ့တယှ သူကကှ မောဒှယခှောလေးအကဖှနှဲ့ယူတော့မှာပေါ့ ၊ ဒီလိုနဲ့ ဂုတကှ ဂှီ့ကလေးလေးကို ထိနှးခဲ့ရငှး ခီရာကှမလှို့ခေါတှဲ့လူခှောလေးနဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့တယှ ၊ မထငမှတထှားပဲ ခီရာကှမကှ ဂှီရာဖတှ အကိုဖှဈနတေဲ့အပှငှ အကဖှရှညှးစားဟောငှးပါဖှဈနတေဲ့အခါမှာတော့ သူ့ညီ ရှရေ့ေးမပကှစှီးဖို့ ဂုတကှို သူနဲ့လကထှပဖှို့ကမှးလှမှးခဲ့ရာက ဂှီ ဂုတှ ခီ သူတို့တှရေဲ့ သုံးပှငှ့ဆိုငဇှာတလှမှးလေးစတငခှဲ့တော့တယှ...။ (အညှနှးရေးသားပှီး ဘာသာပှနပှေးထားကှတာကတော့ Kyi ...
File Size : (661 MB , 269 MB) Quality : WEB-DL 720p Running Time : 1 hr 13 min Format : Mp4 Genre : Animation , Adventure , Sci-Fi Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hus Lei Encoded by Moe Myint Lwin ဒါကတော့Netflixက လက်တလောပူပူနွေးနွေး ထွက်ရှိထားတဲ့ ဟာသကားလေးတစ်ကားပါ။ မိဘအရင်းတွေဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ ကိုယ့်မိဘတွေကဘယ်သူလဲ ဘာလို့ကိုယ့်ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တာလဲ မောင်နှမတွေကရောဘယ်သူတွေလဲ အခုအချိန်မှာအရမ်းချမ်းသာပြီးအောင်မြင်နေကြပြီလားလို့ တွေးနေမိမှာပါပဲ။ ဒီကားမှာတော့ မိဘအရင်းတွေကိုမသိပေမယ့် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးပြင်းလာပြီး ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောက်ကျကာ မကြာခင်ဖခင်ဖြစ်တော့မယ့် အယ်လန်တစ်ယောက် သူ့ကလေးမမွေးခင်လေးမှာပဲ သူ့အမေကိုရှာဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်။ နောက်တော့ Sextuplets ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ သူတို့ကိုသူ့အမေကခြောက်မြွာပူးမွေးခဲ့မှန်းသိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ အမေနဲ့နေတဲ့သူ့အမြွာညီတစ်ယောက်နဲ့အတူ နောက်မောင်နှမတွေကိုလိုက်ရှာဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ သူ့မောင်နှမတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိနေမယ်လို့ထင်ထားပြီး မိသားစုတွေပြန်လည်ပေါင်းစည်းချင်နေတဲ့အယ်လန်တစ်ယောက် သူ့ခရီးစဉ်မှာ ဘယ်လိုပေါက်ကရအလွဲတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဟာသကားလေးမှာ တစ်ချိလုံးခွီပြီး ကြည့်ရှုရမှာပါ။ File Size : (933 MB , 300 MB) Quality : WEB-DL 720p Running Time : 1 hr 37 min Format : Mp4 Genre : Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated ...သေခြင်းတရားဟာ မသေဆုံးပါဘူး။ အဆို‌တော်တစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်ဝင်သီချင်းတစ်ပုဒ်။ လူ‌တွေဟာ Polar Fracking ကနေ စွမ်းအင်ထုတ်ယူ သုံးစွဲခဲ့ကြတယ်။ အလွန်အကျွံ သုံးစွဲမှုတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ကမ္ဘာ‌‌မြေကြီးဟာ Polar Fracking ကြောင့် သူ့ဝင်ရိုးပေါ်ကနေ တိမ်းစောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကတော့ .....နေ့အလင်းရောင်ဟာ တော်တော်နဲ့မကုန်တော့ပါဘူး။ နေ့တာရှည်လာပါတယ်။ ရေဒီယိုတွေ လိုင်းမကောင်းချင်တော့ပါဘူး။ ဖုန်းလိုင်းတွေ ပြတ်တောက်ကုန်ပါတယ်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ ပျောက်တဲ့ကောင်ပျောက်ကုန်ပါတယ်။ အမူအကျင့်တွေ ‌ပြောင်းလဲကုန်ပါတယ်။ အဲဒီထက် ဆိုးတာကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပါပဲ။ သေဆုံးခြင်းက မသေဆုံးတော့တဲ့အခါ ..... Zombie ကားကို အတွေးအခေါ်တစ်မျိုးနဲ့ ထပ်ကြည့်ကြည့်ပါ။ Horror ကား ကောင်းကောင်း ကြိုက်တတ်သူများ လက်မလွှတ်စေချင်ပါဘူး။ အဲ ......ဒီဇာတ်ကားထဲမှာမင်းသားကြီး Andy Laoနဲ့ Louis Kooတို့အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Louis Kooကိုလဲပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်မှာပါ..ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဟောင်ကောင်မြို့မှာအကြီးဆုံးမူးယစ်ရာဇာဖြစ်လာတဲ့ တိကျန့်ဟာဟောင်ကောင်မူးယစ်ဈေးကွက်ကိုအုပ်စိုးဖို့ ကြိုးစားနေသူပါ.. တစ်ဖက်မှာလည်း ဟောင်ကောင်မူးယစ်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့က ဒါရိုက်တာယွီစွင့်ထျန်းဟာ မူးယစ်ရာဇာတွေအားလုံးကိုဖြိုခွဲဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြမလဲ...သူတို့ကြားမှာ ဘယ်လိုအငြိုးတရားတွေရှိနေတာလဲဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် Unicode ********* The White Storm ကားရဲ့ ဒုတိယမွောကျကားပဲဖွဈပါတယျ ပထမကားကိုဒီမှာဒေါငျးယူနိုငျပါတယျ ဒီကားလေးဟာ 2019 julyလကမှထှကျထားတဲ့ ဟောငျကောငျအကျရှငျဇာတျကားကောငျးလေးတဈကားဖွဈပါတယျ..
Hero (သူရဲကောင်း) ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကို ရည်ညွှန်းပါသလဲ? တဦးတယောက်ကနေ ပြိုင်ဘက်အများကြီးကို အလဲထိုးအနိုင်ယူသူတွေကို ခေါ်ပါသလား? ကိုယ်ကျိုးကို မငဲ့ဘဲ အများအတွက် စွန့်လွှတ်စွန့်စားသူများကို ဆိုလိုပါသလား? Hero (2002 film) ကို ကြည့်ပြီးရင်တော့ အဖြေတခုခု ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ Hero ရုပ်ရှင်ကို စပြီးကြည့်ဖူးစက ယုတ္တိမတန်တဲ့ သာမန်တရုတ်သိုင်းကားတကားလို့ပဲ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ နောက်ကြောင်းက ခဏခဏပြန်ပြ၊ ဒီကြားထဲစိတ်ကူးထဲမှာပါ သိုင်းကွက်တွေထုတ်နဲ့ …